अनमोल आभाष| Ujyaalo Online:: Nepal News, Nepali Samachaar
अर्थमन्त्री ज्युलाई एउटा प्रश्न गर्न मन लाग्यो । नागरिकले कर तिर्न नसके छुट दिने भन्नु भएको रहेछ । बुझिएन नि, अनि के का लागि कर बुझाउन पर्ने हो ? नागरिकले दिएको अमुल्य भोटको दाम हो कि के हो ? देशको सबै मिडिलाई कर तिर्ने कारण खुलाई दिनु प¥यो, नागरिक अन्योलमा छन् ।